Hodgson Oo La Filayo Inuu Ka Soo Tago Ferdinand Marka Uu Maanta Ku Dhawaaqo Xulka England Ee Euro 2012. - jornalizem
Hodgson Oo La Filayo Inuu Ka Soo Tago Ferdinand Marka Uu Maanta Ku Dhawaaqo Xulka England Ee Euro 2012.
Rio Ferdinand ayaa qarka u saaran in laga soo tago xulka England ee ka qeybgalaya ciyaaraha Euro 2012 marka uu maanta tababare Roy Hodgson ku dhawaaqo ciyaartoyda rasmiga ah ee uu u kaxeysan doono koobkaas bisha soo socota ka dhacaya Ukraine iyo Poland.
Hodgson ayaa la rumeysan yahay inuu shalayto la hadlay daafaca Manchester United islamarkaana ku wargeliyay inuusan aadi doonin Poland iyo Ukraine xagaagan.
Ferdinand ayaan wax hadal ah ka oran arintaan, inkastoo go’aanka Hodgson lagu sheegay inay saldhig u tahay dhabar xanuunka uu qabo 33 jirkaan.
Tababare Sir Alex Ferguson ayaa dhawaan sheegay in Ferdinand ay ku adag tahay inuu ciyaaro labo kulan afar maalmood gudaheed, waxaana tababare Roy Hodgson uu go’aan ku gaaray inuusan wax riski ah gelin isagoo ka qeybgalaya koob weyn, islamarkaana uu go’aansaday inuu ka soo tago Rio Ferdinand.
Warkaan ayaa dhabar jab xoog leh uu ku noqon doonaa Ferdinand kaasoo doonayay inuu ka qeybgalo koobka Euro 2012, inkastoo xiriir xun uu kala dhaxeeyo daafaca ay isku wadanka yihiin John Terry, kaasoo bisha July maxkamad loo soo taagi doono eedeymo la xiriira inuu cunsurinimo kula dhaqmay Ferdinand walaalkiisa ka yar Anton.
Xilli danbe oo maanta ah ayaa si rasmi ah loo ogaan doonaa hadii tababare Roy Hodgson uu ka soo tagay Rio Ferdinand iyo in kale, marka uu ku dhawaaqo ciyaartoyda uu u kaxeysan doono Poland iyo Ukraine.
Xulalka waa weyn ayaa intooda badan haatan sii magacowday xulal hordhac ah oo ay ku tijaabinayaan ciyaartoyda qaarkood, lakiin Germany, Spain, Italy iyo Netherlands waxaa la filayaa in xulalkooda rasmiga ah inay ku dhawaaqaan kama danbeys isbuuca soo socda markaasoo UEFA loo gudbin doono.